ULewis Hamilton unqobe umjaho we-Saudi Arabia Grand Prix | Scrolla Izindaba
ULewis Hamilton unqobe umjaho we-Saudi Arabia Grand Prix
ULewis Hamilton uphumelele kwi-Saudi Arabia Grand Prix ngenye indlela okwenze kwaba nezinkulumo ezingaqondakali.
Lokhu kulungiselela umjaho weFormula One okungaziwa ukuthi kuzonqoba bani kuwo – njengoba bobabili uHamilton noMax Verstappen bezongena ezingeni lokugcina lomjaho ngamaphuzu.
Umjaho wayizolo obuse-Jeddah Street kumgcele oyingozi kakhulu njengoba amafulegi amabili abomvu nezimoto ezintathu zezokuphepha zibone abashayeli abahlanu bengakwazi ukuqeda umjaho ku-Grand Prix bephazamiswa izigameko eziningi.
Kuyo yonke isizini, uHamilton noVerstappen bebevaleleke kwimijaho ebishube ngaphakathi nangaphandle njengoba kade beqhudelana nabashayeli abangompetha futhi umjaho owenzeke izolo owandulela owamanqamu wesizini, ubungahlukile.
Umshayeli waseBrithani uzame ukudlula kumgwaqo oqondile ngenkathi uVerstappen, owaziwa ngokushayela kwakhe “okunesibindi”, eqhilisa imoto kaHamilton ukuba avuleleke indlela futhi wazuza ngokweqa imingcele yomgwaqo.
UVerstappen uyalelwe ukuba abuyisele isikhundla kuHamilton kanye neqembu lakhe, okuyilokho akwenzile ngokunciphisa isivinini esisheshayo kanye nokuhlola amabhuleki, kodwa uHamilton ube yimbangela yokuthi laba bashayeli ababili bashayisane.
UVerstappen ubengakambuyiseli uHamilton endaweni yakhe kwathi ngemuva kwemizuliswano eminingana walandela imiyalo yeqembu wanikela indawo, kodwa wabuye wasithatha ngokushesha lesi sikhundla.
Njengoba abaphathi bomjaho bebenganelisekile ngomnyakazo wakhe, abakwa-Red Bull noVerstappen bayalwe ukuthi baphinde bavumele uHamilton aqale phambili futhi baphinde bahlawuliswa ngephenathi yokuqala umjaho ngemuva kwemizuzwana emihlanu ngokuthola inzuzo ngokweqa imingcele yomgwaqo.
UHamilton ube esehola lo mjaho futhi wavula igebe elikhulu ngaphambi kukaVerstappen yize ebebhekene nokulimala phambili. UVerstappen, obezifake engozini ngokusebenzisa amathayi aphakathi nendawo, uhambise imoto yakhe kwithimba lakhe lezimoto iyonakekekelwa njengoba amathayi akhe ebeseqala ukungasebenzi.
Ngokulandela umjaho, uVerstappen oneminyaka engama-24 ubudala unikezwe enye inhlawulo yemizuzwana eyishumi ngokwehlisa ijubane lapho obekungenasidingo khona.
Umjaho wokugcina wonyaka e-Abu Dhabi uzoba umcimbi othokozisayo, noyingqophamlando njengoba bobabili abashayeli befinyelela ezingeni langempelasonto ngamaphuzu angama-369.5 ukuze banqume ukuthi ubani ozophuma njengompetha we-Formula One yonyaka wezi-2021.